माधव नेपाललाई प्रचण्डसँगको दोस्ती नै प्यारो - Sidha News
माधव नेपाललाई प्रचण्डसँगको दोस्ती नै प्यारो
मुलुकको राजनीतिमा नेताहरुले छिनछिनमा आफ्नो अडान र निर्णय परिवर्तन गरिरहेका छन् । लामो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल अचानक आफ्नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्न पुगे । ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न प्रचण्डसँग मिलेर गतिविधि गरेका नेता नेपाल एक्कासि ओलीको सत्ता जोगाउन भूमिका निर्वाह गरे।
यसपछि धेरैले प्रचण्ड र नेपालको दोस्ती टुंगिएको बताए । तर, नेता नेपालले प्रचण्डसँगको राजनीतिक दोस्ती मास्न नचाहेको नेताहरु बताउँछन् । भोलि बिहीबार बागमती प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक सिटका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ।
एमालेबाट रामबहादुर थापा बादललाई उम्मेद्वार बनाइएको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितले डा. खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । डा‍. देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नेकपा एमालेको माधवकुमार समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले पनि सहयोग गर्ने बताएको थियो।
तर, अहिले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएको छ । नेपाल समूह संस्थापनसँग वार्तामार्फत मूल प्रवाहमा आएको छ । जसपाको पनि दुवै समूहले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने बताएको छ । तर, यही बेला मंगलबार आफूलाई सहयोग गर्न आफ्नै नेता रामबहादुर थापा बादल आउँदा नेता नेपालले आफूले देवकोटालाई सहयोग गर्ने वचन दिएको बताए । अर्थात बादललाई सहयोग नगर्ने नेता नेपालले बताए।
यसपछि नेता नेपालमाथि प्रचण्डसँगको दोस्ती तोड्न नसकेको आरोप लागेको छ । जनतासँग गरिएको वचन पूरा नगर्ने राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार विचार व्यक्त गर्छन् । एमालेकै नेतालाई जिताउन खुलेर लाग्छु भन्न नसकेका नेता नेपालले विपक्षी दलका नेताहरुको साझा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बताए।
सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका माधवकुमार नेपाल त्यही चिन्ह लिएर आफ्नै पार्टीको झण्डा बोकेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका बादललाई सहयोग नगर्ने आशय व्यक्त गरेका हुन् । आफ्नो समूहका मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्न दिने वचन दिएर नेता नेपालले मंगलबार बादललाई फर्काए।
तर, नेता नेपालको जवाफलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ । त्यसमध्येको एक हो, प्रचण्डसँगको दोस्ती कायम राख्नु। बादललाई असहयोग गर्दा उनी पराजित भएमा अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नो शक्ति देखाउन पाउने नेता नेपालको बुुझाइ छ।
उता बादल पराजित भएमा एमालेमा आएकोमा पश्चताप गर्दै माओवादीमा फर्कन सक्ने अनुमान नेता नेपाल र प्रचण्डको रहेको नेताहरुको बुुझाइ छ।यही बुुझाइका आधारमा नेता नेपालले बादललाई भोलि बिहीबार हुने राष्ट्रिय सदस्य निर्वाचनमा सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएको नेताहरु दाबी गर्छन्।
प्रचण्डसँगको दोस्ती सुरक्षित गर्न आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार बादललाई खुलेर समर्थन गर्नुपर्नेमा नेता नेपाल त्यसबाट पछि हटेका हुन्।